... Uphi umhlobo ...
... uphi mfondini ...
NgoSeptemba, 2009 Uhambo
Akukho zimpendulo zininzi:
Sikhetha esikwenzayo, phantse yonke into, nangona ndicinga ukuba izinto ezininzi azikho nzima ngakumbi ngenxa yokunqongophala kwexesha. Kuyanelisa ukubona iziphumo ezinomdla koomasipala abanokuthi ngezikhonkwane zabo kunye nokutyhala okuncinci banokufikelela kuko ngolawulo lomhlaba. Masingatsho ukuba abantu abancinci abaqale ngesilinganisi esisebenzisekayo emva kwemitha ye-11, ngoku kwiiveki ezimbini baqhekeza indawo yedolophu enesikhululo esipheleleyo kwaye bashiyeka bezibuza ukuba ngubani olandelayo.
Ngelixa ndibuya kuhambo, ndishiya imbonakalo emifutshane yeehotele zokufa ezimbi, ezo imeko yomoya zonakaliswe e3 kusasa.
Ngaphandle kwento abayithethayo, musa ukuthatha ithuba Umhlaba ka-Google Ngeenjongo ze-cadastral kukucekisa ukusebenza kwaye ungathembi into ekuya kuba yiyo.
Into elungileyo malunga naloo nto IMexico iya kuhlala Kumdlalo wokudlala umdlalo wokuhlungela iNdebe yeHlabathi, eso sikhundla singadlalwa neArgentina, ekwiimbandezelo ezifanayo (namhlanje). Kwaye iya kuba ngumdlalo omkhulu!
Akufanelanga ukuba ndive kakubi kuba bagxotha ingcibi eyayinexesha elinzima lokufumana uqeqesho ... kwilizwe apho ukusuka kusuku olunye ukuya kolandelayo tshintsha umongameli.
Ubomi kufuneka bube ilula kakhulu, njengam, ifriji, uGoogle kunye neNetbook yam. Hayi, ngaphandle kokulibala i-Wireless, i-Acer, ikhamera yeBenk, i-Blackberry, ithebhulethi ye-Bamboo, i-Aigo, i-PHP, i-WordPress, i-Ubuntu, iMapserver, i-gml… mmm… ayibonakali ilula ngoku.
Nangona kunjalo, iMexico neArgentina ziya kuhlala zisiya kwiNdebe yeHlabathi, ilizwe liza kuphinda libe nomongameli onyuliweyo, uGoogle Earth uya kufezekisa isentimitha ngokuchanekileyo kwaye itekhnoloji iya kubenza nzima ubomi. Nini, ngumcimbi nje wemizuzu, iiyure okanye iintsuku.
Kwaye ndiza kuqhubeka nokuhamba kwaye ngubani owaziyo ukuba ngenye imini ndinyamezele ndonwabile ngoLusu Geofumadas.com
Umhlaba ka-Google mapserver egeomates My Wordpress
Post edlulileyo«Ngaphambilini Inkqubo Efanelekileyo Yomhlaba
Post Next Mna, iCadastre kunye neGoogle EarthOkulandelayo »